Akụkọ kachasị ọhụrụ banyere Association nke Pensioners Federal Civil Service si Nigeria & ụwa | TAA
Ndị nnọchianya Maada Bio Sierra-Leone, ndị ọrụ n'elu 60
Ụlọ mkpọrọ Naijiria kwesịrị ịbụ maka nhazigharị - Gọvanọ Okowa
NEMA jiri N400m kpochapụ onyinye N414.8m osikapa
2019: Senator Magnus Abe na-ekwupụta nchịkwa gọọmentị Rivers
Golden Eaglets emesị mepee ogige ọzụzụ na Abuja n'ọnwa ọzọ
Jupp Heynckes: Ntak Bayern Munich gbawara Real Madrid na Allianz ...
Ikechukwu Ezenwa na-edebe akwụkwọ dị ọcha dika Enyimba wallop Go Round FC ...
Aaron Ramsey: Arsene Wenger si ọpụpụ amara mkpali nke Arsenal merie ...
Home Tags Òtù Na-ahụ Maka Ụlọ Ọrụ Ndị Ọrụ Obodo Na-ahụ Maka Obodo
Òtù Na-ahụ Maka Ụlọ Ọrụ Ndị Ọrụ Obodo Na-ahụ Maka Obodo
Ndị na-akwụ ụgwọ na-achọ ụgwọ ziri ezi site na itinye ego na ụtụ ego
A gbara akwụkwọ uwe ikpe ịrịọ ka Ụlọikpe Ikpe nke ECOWAS "nye iwu gọọmentị nke President Buhari iji wepụ ụgwọ ezumike nká, ụgwọ ọrụ na ụgwọ nke ndị ezumike nká na ndị ọrụ site na ntinye ego nke ọchịchị gọọmenti akwụ ụgwọ ma na-akwụ ụgwọ ndị ahụ na ndị ọrụ ezumike nká na ndị ọrụ kwa ọnwa ".
SERAP, ndị ezumike nká na-agba ọchịchị gọọmenti etiti na ụlọikpe ECOWAS maka ụgwọ ezumike ịkwụ ụgwọ, ụgwọ ọnwa
Ha chọrọ ịkwụ ụgwọ ezumike nká niile, ụgwọ ọrụ na onyinye n'efu site na nkwụnye ego sitere n'aka gọọmenti etiti, na ịkwụ ụgwọ nkwụnye ego nke N50 nde nke ọ bụla n'ime ndị na-akwụ ụgwọ na ndị ọrụ.
President nke Sierra Leone, Julius Maada Bio emeela ka ndị ọrụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị niile nọ na mba ndị ọzọ si na mba ọzọ pụta, gụnyere ndị nnọchianya na ihe ọmụma.
Ọchịchị Gọvanọ Delta Ifeanyi Okowa kwadoro ka ụlọ mkpọrọ dị na Nigeria bụrụ maka mgbazi na nhazigharị nke ndị mkpọrọ karịa ebe maka ahụhụ na stigmatization.
Ihe edeputara kọmitii site na ozi ego nke July 20, 2017 na-egosi na oke osikapa bụ 6,779 metric tonnes dị na N414.8 nde mgbe ọrụ gọọmenti etiti nke ugbo ji ego ọzọ nweta N272.5 nde.
Onye Senator na-anọchite anya Rivers South-East Senatorial District na National Assembly, Senator Magnus Ngei Abe, taa kwuru na ya bu n'obi ịlụ ọgụ maka ọchịchị nke Rivers State na 2019 na n'elu ikpo okwu nke All Progressives Congress (APC).
Ndị ọchịchị kwuru na Golden Eaglets, U17s nke mba ahụ, ga-amalite ịzụ ọzụzụ na Abuja n'okpuru nlekọta nke nchịkwa Manu Garba.
NSCDC nabs na miner minista na Ondo
Ụlọ ọrụ na-ahụ maka nchebe na ndị na-ahụ maka ọdịmma mmadụ (NSCDC) na Ondo State na Wednesday gosiri na a ga-enyo enyo na ọ ga-etinye aka na ntinye iwu na-akwadoghị.
Gọọmentia India kwadoro ikpe ọnwụ maka ụmụaka ndị na-azụ ụmụaka
Gọọmentia India na Saturday kwadoro ugwo ọnwụ maka ụmụaka ndị na-azụ ụmụaka, mgbe òtù ndị ohi na igbu ọchụ nke nwatakịrị nwanyị dị afọ asatọ na ọtụtụ ụdị mwakpo ndị ọzọ jọgburu onwe ha kpatara ọgba aghara mba.
Mkpesa obodo na-ekwu na 20 bi na Nasarawa
Egburu ndị mmadụ 20 na ọbara oyi ha na Ugya, Obodo Toto Local Government Area nke Nasarawa State na nsogbu obodo nke dara na Tuesday, n'etiti òtù Ebira na Bassa.
Zimbabwe na-aṅụ ara 'na-anwa ule nke ọchịchị ọhụrụ
Ọtụtụ ndị nọọsụ gosipụtara na isi obodo Zimbabwe na Fraịdee mgbe gọọmenti kwụsịrị 16,000 ha na ụlọ ọgwụ ọha na eze maka ịchọta ọnọdụ ọrụ ka mma na ịkwụ ụgwọ dị elu.